चीन भन्छः हाइड्रोजन बम देशको आत्मरक्षाका लागि हो ? « Media for all across the globe
चीन भन्छः हाइड्रोजन बम देशको आत्मरक्षाका लागि हो ?
पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा चिनियाँ सेनासँग भएको भिडन्तमा भरतीय १ कर्नेलसहित १९ जवानको मृत्युपछि दुई देशबीच थप तनाब बढेको छ। गलवान घटनाले भारतीय पक्ष आबेगमा उत्रिएको छ। देशका बिभिन्न स्थान र भारतका लागि चिनियाँ दुतावास दिल्ली नजिकै युवाहरुको समूहले बिरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्। वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेर चीनले आफ्ना सेनामाथि आक्रमण गरेको भारतको आरोप छ। गलवालको हिंसात्मक भिडन्तलाई भारतीय सेनाले चीनको चालबाजी संज्ञा दिएको छ। वार्ताको माध्यममार्फत नै सीमा विवाद समाधान गर्ने उदेश्यले बुधवार भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले चिनियाँ समकक्षीसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्।
दुई देशका सेना अधिकारीहरुको लामो वार्ताले दुबै सेनापछि हट्ने सम्झौता भएपनि, चिनियाँ सेनाले अटेर गर्दा भिडन्त भएको भारतीय रक्षा मन्त्रालयको भनाई छ। भिडन्तमा भारतीय २० को ज्यान गयो। चिनियाँ ४३ सेना मृत्यु भएको खबर बाहिर आएपनि यसको आधिकारी पुष्टि भएको छैन। हतियार बिनै भिडेका दुई सेनाबीच अहिले शान्ति भएतापनि उक्त स्थानबाट चिनियाँ क्याप्पपछि नहटेको भारतीय सेनाको दाबी छ। भारतले चीनसँग जोडिएका सिमानामा सेनाहरुको संख्या बढाएको छ। सेनालाई तयारीका साथ रहन समेत आदेश स्रोतले बताएको छ।
लद्दाखमा जारी सडक निमार्ण कार्यलाई पनि भारतले तिब्रता दिएको छ। बन्दाबन्दीका कारण गाउँ पुगेका १५ सय सडक कामदारलाई लद्दाख पु¥याउन व्यबस्था थालेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधवार सम्बोधन गर्दै गलवान घटनामा मृतक सेनालाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले आफुहरु पनि जवाफ दिन संक्षम रहेको बताउँदै, चीनलाई यस प्रकारको हर्तक नगर्न आग्रह समेत गरे।
चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था ग्लोबल टाइम्सले सन् १९६७ मा परिक्षण गरेको हाइड्रोजन बमको भिडियो पोस्ट गरेको छ। चीनको दाबी छ कि – यो हाइड्रोजन बम देशको आत्मरक्षाका लागि हो। ग्लोबल टाइम्सको भिडियोले भारतीय संचारमाध्यमा भने हलचल मच्चिएको छ। नवभारत अनलाइलले यही भिडियोलाई लिएर चीनले भारतको धम्काएको समाचार बनाएको छ।